Listen Technologies က ၂၀၁၄ InfoComm အကောင်းဆုံးပြသသည် NAB သတင်းများ | 2014 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Listen Technologies ကပြရန်၏ 2014 InfoComm အကောင်းဆုံးလက်ခံတွေ့ဆုံ
nice အလုပ်! @ListenTech: "အသိအမှတ်ပြုခံရရန် ... တဦးတည်းခံယူနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးချီးမွမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု http://t.co/5JMGMA3wuP #InfoComm14 #ListenTech "
Listen Technologies ကပြရန်၏ 2014 InfoComm အကောင်းဆုံးလက်ခံတွေ့ဆုံ
nice အလုပ်! @ListenTech: "အသိအမှတ်ပြုခံရရန် ... , တဦးတည်းခံယူနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးချီးမွမ်း၏" t.co/5JMGMA3wuP #InfoComm14 #ListenTech "
ယခင်: WLWT-TV ကိုငါ့ကိုတီဗီထုတ်လွှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်4ရက်အကြာမှာ
နောက်တစ်ခု: InfoComm 2014 မှစ. AVI Takeaways - ပေး Audio Visual Presence System စမ်းသပ်နှင့်အသံလွှင့် System Integration